Semalt: Indlela yokunqanda u-Pop-Ups kunye ne-Ad Blockers
Iintengiso ze-Pop-up ziye zajikeleza ukususela ekuqaleni kweWebhu yeWide yeWebhu. ULis Mitchell, u-10 (Semalt oyingcali, uchaza ukuba njengeentengiso zebhanki, ziindlela elula kubavakalisi ukuba bakhuphe okanye bakhuthaze imveliso kunye neenkonzo kwi-intanethi. Nangona ezinye i-pop-ups zi luncedo kwaye zi luncedo, inani elikhulu labantu abanokulimaza indawo yakho.
Yisiphi isikhangiso esiphezulu?
Okokuqala, makacacise ukuba yi-pop-up. I-pop-ups iithebhu, iifestile, kunye neebhokisi ezizivula ngokuzenzekelayo kwaye zihlale apho size senze into yokuba zivaliwe - oculos de sol verde espelhado. Uhlobo oluphambili lwe-pop-ups lu-pop-phantsi, iwindow evula emva kweziphequluli zethu zewebhu. Kuyinyani ukuba akusiyo yonke i-pop-ups efanayo kwiimpawu kunye neepropati. Ezinye zazo zi luncedo kwaye azifaki ukungena ngamagama abasebenzisi kunye namaphasiwedi, ngelixa ezinye i-pop-up ziyakhathaza kwaye zonakalise njengoko zithumela izicelo kubasebenzisi kwaye ziyabakhuthaza ukuba zibhalisele kwiifolda. Umzekelo we-scareware pop-up yi-malwaretips.com.
Indlela yokuzikhusela izikhangiso eziphambili kwi-Pop-Up?
Kukho iindlela ezintathu zokuvimba ukukhupha kwiindlela: izicwangciso zesiphequluli sakho, i-block blockers njenge-AdBlock kunye ne-block-up blockers.
1..I-Pop-Up Ukukhusela kwiSiphequluli sakho sewebhu
Iipheqululwazi zewebhu zinezibhengezo zabo ezizenzekelayo. I-Google Chrome, i-Firefox, i-Intanethi Explorer, kunye nazo zonke ezinye iiphequluli zisingatha iintengiso ze-pop-up ngokuhlukileyo, kwaye akuzona zonke ezo zikhethi ukuba sikhethe ukuvimbela i-pop-ups kwiwebhusayithi okanye cha.
2. I-Blockers ye-Pop-Up Ad Blockers ezinikezelweyo:
Njengoko igama layo libonisa, abakhi be-pop-up baza kugxininisa ekunqandeni zonke iintengiso zentengiso, nokuba ziyakunceda wena okanye cha. Ngokungafani nabalandeli besikhangiso, abavimba be-pop-block abathinteli nawuphi na uhlobo lwesibhengezo. Ukuze ukwazi kabanzi malunga nabo, kufuneka nje uthayiphe "i-blockers-pop-up blockers" yeThrown, "abadumileyo kunye nabanqabileyo abakhulu be-Firefox," kunye "neyona ndlela ibaluleke kakhulu kunye nabanqabileyo abanokubaluleka kakhulu kwi-safari" injini yokukhangela. I-Microsoft Edge ayinayo indlela ekhethekileyo yokuthintela iintengiso ze-pop-up.
3. I-Ad Blockers
Iintengiso ze-pop-up zicelwa ngendlela efanayo nezo zipapasho zekhasi; Ababhengezi besikhangiso banokumisa bonke ngokungagqibekanga. Xa ungasetyenzisi i-ad blocker ngaphambili, sincoma ukuba uzame i-AdBlock. Enye yezona zixhobo ezisemgangathweni kunye ezisetyenzisiweyo kwi-intanethi. Nangona kunjalo, ayivimbeli zonke iintengiso ze-pop-up ngokuzenzekelayo. Oku kungenxa yokungafani phakathi kwezaziso zenkampani yesithathu kunye neyokuqala. Ngokomzekelo, i-EasyList, isethi yemigaqo yokuhluza kunye nemimiselo esetyenziswe yonke i-blocker ye-ad, kaninzi iyayilahla iintengiso zeqela lokuqala. Ukuba ufuna ukuyibeka iliso, kufuneka uhlole uluhlu lwefayile ye-Annoyances ye-Fanboy. I-AdBlock izakukhusela ngokukhawuleza izicelo ezivule i-pop-ups. Ngamanye amaxesha iifayile eziqhelekileyo zinokukunceda ukunqanda i-pop-ups ngokucoca idatha engafunekiyo ngaphandle. Olunye uhlobo lwe-pop-ups olungavalwa yi-AdBlock yiintengiso ezinobungozi. Nangona i-adware idibaniswa newebhusayithi ye-torrent ehambayo yamahhala kunye nokukhutshwa kwenkqubo yokukhulula, iindawo eziqhelekileyo zijoliswe kwakhona.
Kuyinyani ukuba zonke iintengiso ezingenayo ziyakucasula, ziyingozi okanye zicaphukisa, unako ukuvimba ezininzi iintengiso ezingafunekiyo ngeendlela ezikhankanywe ngasentla.